Soo dejisan UltraSurf 19.02 – Vessoft
WindowsShabakadVPN iyo WakiilUltraSurf
Bogga rasmiga ah: UltraSurf
UltraSurf – software ah websites ee dhirta si qarsoodi ah ee internet-ka. Muuqaaladan weyn ee software waxaa ka mid ah: bannaynta cookies iyo taariikhda goobaha uu booqday, goobaha wakiil, qarin IP-address, meel ka mid ah goobta iwm UltraSurf ammaan sir ka data aad, ka hortagga qof aan shaqo si aad u eegto macluumaadka. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay iska indha faaf internet-ka oo aad u siinayaa in ay helaan websites xidhmey. UltraSurf sidoo kale la shaqeeya gudbiyayaal macluumaadka kala duwan, samaynta jooga ah ee isticmaala qarsoon ee internet-ka PC kasta.
Daydid inaad IP-address
Encryption xogta isugu gudbiyo
Soo dejisan UltraSurf
Faallo ku saabsan UltraSurf
UltraSurf Xirfadaha la xiriira
Waxay hubisaa joogo qarsoodi ah oo amaan ee internet-ka. software wuxuu isticmaalaa gaar ah kaydinta daruur si sir weydiimaha internet-ka.
Set xorta ah ee korontada network in la isugu software hal. Fursado ballaaran oo ay gacanta ku shabakadda ayaa diyaar u ah user ah.
Adeegga Glary – waa qalab loo isticmaalo nadiifinta iyo tayaynta nidaamka hawlgalka. Software wuxuu kuu oggolaanayaa inaad maamusho nidaamka oo aad ka saarto feylasha aan loo baahnayn.
Greenshot – kombuyuutar is haysta ayaa sameeya shaashadda, wuxuu taageeraa qaababka sawirada caanka ah wuxuuna leeyahay tifaftire garaafyo muuqaal ah.